Kuyaziwa ukuthi iJapane inesikhathi eside kakhulu sokuphila emhlabeni. Ngokusho kwedatha ka-2001, iminyaka engu-79 neminyaka engu-84 yabesifazane baseJapane nabaseJapan, ngokulandelana. Futhi empeleni eminyakeni engaphezu kwengu-100 eyedlule baphila iminyaka engama-43 no-44. Iziphi izici ezasiza amaJapane ukuba abe yizimbongolo ezindala? Izakhamuzi zeZwe leNtaba ephumayo azigcini kuphela, kodwa futhi wabelane nanoma ubani ofuna iseluleko ngokugcina impilo enhle namandla omphefumulo nomzimba, okuyinto eyimfihlo yokuphila okude. Ake sibone ukuthi kungani amaJapane ahlala isikhathi eside kangaka.
Okokuqala kudingeka udle imifino eminingi ngangokunokwenzeka. Kufanele zifakwe ekudleni kwakho nsuku zonke. Okuwusizo kakhulu imifino enombala okhanyayo obomvu noma obomvu obala. Lesi isaladi, isanqante, isipinashi. Bazohlinzeka umzimba njalo ngamavithamini, amaminerali, ama-microelements kanye nezintambo zezitshalo.
Qonda amafutha awusizo nengozi. Akuwona wonke amafutha ayingozi. Ziyakudingeka ngisho nasemzimbeni, ikakhulukazi asebekhulile. Ukwandisa isikhathi sokuphila kukhuthazwa ama-acid ayigugu afakwe emafutheni omnqumo namafutha we-sunflower. Isipuni esisodwa ngosuku sanele. Kodwa kungcono ukuyeka ibhotela, kodwa ukudliwa ushizi nenyama ngamanani amancane.
Kuyasiza kakhulu ukuthutha nokuphefumula. Nsuku zonke, yenza ukuzivocavoca okulula ngesikhatsi esilungele wena, yenza ukuhamba okuncane emoyeni omusha phakathi kwezikhala eziluhlaza epaki noma ngaphandle kwedolobha.
Ukuyeka ugwayi nokuphuza utshwala. Yebo, uzwile lezi zikhathi eziningi, futhi wazi ngomonakalo omkhulu omkhulu wokubhema nokudakwa ngokweqile. Kodwa ukuyikhumbula akuyona into engafanele. Nokho, akudingekile ukuba ushiye ngokuphelele utshwala. Iwayini elivuthiwe elivuthiwe lizozuza ngisho uma lidla ngegram of 150 nsuku zonke.
Esinye sezimfihlo zokuphila isikhathi eside saseJapane, ngokusho kwamaJapane ngokwawo, imizwa emihle. Akugcini nje ukuhlala ekhanda, kodwa futhi nokulawula umzimba othile. Ungakhathazeki futhi ungakhathazeki ngezihlungi, kungcono ujabulele kunoma yiziphi izinto ezincane. Khona-ke isimiso somzimba samasosha omzimba sikhiqiza amaseli T no-B, okukwazi ukuvikela umzimba ezifweni ezihlukahlukene ezithathelwanayo, kuhlanganise nomdlavuza. Kodwa ngesikhathi sokudabuka noma ukwesaba isimo lawa maseli akhiqizwa. Ukuvikeleka kwamasosha kunobuthakathaka.
Qinisekisa ubuchopho ukusebenza. Ngokuyincike emisebenzini ezohlala ihamba kancane ezindaweni ezibhekele inkumbulo yakho.
Esinye isizathu esenza ukuthi amaJapane aphile isikhathi eside kangaka, alele amandla abo okuphumula ngesikhathi. Lahla ukucindezeleka okudingayo ukuze ukwazi. Ikakhulukazi ezikhathini zethu ezinzima nezinkathazo. Ukucindezeleka okuqhubekayo kuholela ekwehleni emsebenzini womzimba.
Ungakhohlwa ukunikeza isikhathi esanele sokulala. Ulungisa imicabango yakhe futhi unike umzimba ukuphumula. Ivumela izinga lokushaya kwenhliziyo futhi linciphise ukucindezela komzimba. Ibuyisela isimiso semfihlo ye-hormonal. Futhi ngisho namanxeba aphulukisa ngokushesha ephusheni.
Ungasusi. Uhlelo lokuvikelwa komzimba kumele luqeqeshelwe njalo. Qinisekisa ukuthi uvuselela igumbi. Ngezinye izikhathi, vumela ukuba uthole ukushisa okuncane. Khona-ke umzimba ngeke uphumule ngokuvikela ukutheleleka, futhi uzohlala uhlale ithoni, ilungele ukubuyisela noma yikuphi ukuhlasela okuphazamisayo.
Ungadli ngokweqile. Zonke izindebe ezinde zazilingana nokudla, futhi zidla kakhulu. Zama usuku ukuthi ungadli ngaphezu kwama-khalori angu-2000. Futhi ungakhohlwa ukufaka ekudleni amavithamini ahlukahlukene, ikakhulukazi A, E noC.
Ngokuvamile ukuhleka. Ukuhleka kuyinto efanayo yokuzivocavoca umzimba. Ngesikhathi sokuhleka, imisipha eminingi isebenza. Imisipha yobuso, umshini womzimba wesisu, isifo se-diaphragm nesisu. I-oxygen egcinwe kumaseli ivuselelwa, i-bronchi namaphaphu iqondiswa, futhi ipheshana lokuphefumula likhishwa.
Futhi lezi zimfihlo zisiza amaJapane aphile isikhathi eside? Iqiniso kubo alikho into engavamile futhi engaqondakali, ukuyigcina akuyona inzima hhayi imithwalo? Kungani ungazami ukuwalandela? Futhi vumela ukuphila okude, okujabulisayo kulindele wena!
I-Psychotype ye "Hugo" - ukuhlukunyezwa noma ubuhle
Izimiso Zempawu Zodiac
Odorology kanye neziphunga empilweni yomuntu
Indlela yokuzivumelanisa nendlela yokuphila enhle?
Umkhankaso wokukhangisa wenkonzo yokuthengisa ithikithi
Ukukhulelwa kwengane kanye nezimpawu zokukhulelwa
Isaladi yamaShayina enommbila
Izingoma zanamuhla nezifushane nezinkondlo ze-Autumn Ball yabantwana besikole. Isingeniso se-Autumn Ball mayelana ne-Autumn
Izifundo zokusungula kwezingane: izidwebo zomunwe
I-osteoarthritis ye-ankle: izimpawu, ukwelashwa
Indlela yokwenza umbukiso omuhle?
Izinyathelo zomsebenzi wezobuchwepheshe
Banana ama-muffin ane uju ne-bhotela
Indlela yokuziphatha uma uphula i-mercury thermometer
Ngokokuqala ngqa u-Marina Anisina wakhuluma ngokukhululekile ngokuphila no-Dzhigurda
Lapho ungazithembi wena kuphela?
Ubhontshisi buhle empilweni yomzimba